I-Stanozolol (Winstrol) ipowder (10418-03-8) ≥98% | Yenza i powder powder
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Stanozolol / Winstrol / powny powder
SKU: 10418-03-8. Udidi: Anabolics Steroids
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba elincinci le-Stanozolol (Winstrol) ipowder (10418-03-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Stanozolol / Winstrol / winny powder ividiyo
Stanozolol / Winstrol / powny powder esisiseko Abalinganiswa:
igama: Stanozolol / Winstrol / powny powder
I-Stanozolol / Winstrol / i-winny usetyenziso lwe powder kumjikelezo we-steroids
I-Stanozolol powder nayo ibizwa ngokuba yi-Winstrol powder, powder powny.
Ukusetyenziswa kweStanzolo / Winstrol / Winny powder
Ngomdlali ophucula ukusebenza 25-50mg / imini yinto eqhelekileyo phakathi kwabadlali besilisa.
Abaqulunqa umzimba baya ku-50mg.
I-5mg yomlomo we-Stanozolol powder yiyona nto ixhaphakileyo ye-female dose, i-20mg yonke imihla ye-3-4.
Isilumkiso kwi-Stanozolol powder
Kukho imiphumo emibini eyenzekayo ye-Stanozolol powder ekufuneka iqwalaselwe. Oku akuyiyo into esiyibiza ngokuba yi-steroid ekhohlakeleyo ngokwemiphumo emibi, kodwa inokukhuthaza iimpendulo ezininzi xa zingasetyenziswa kakuhle. Uninzi lweemiphumo ezichaphazelekayo, ngokukodwa ubunzima buya kuhambelana nempendulo yezofuzo.
Iyakwazi ukuzisa ukuze amanye ama-hormone asebenze kakuhle, kodwa oku akuyona into eqhelekileyo. I-Stanozolol powder ayikho into esiya kuthiwa yiyona steroid eyingozi kunayo nayiphi na indlela, kodwa akuyona into ebalulekileyo yecala lomhlobo. Ukusetyenziswa kusilondolozwe kakuhle xa ihommone izokubonelela ngezona zinto zintle. Ukusetyenziswa kwamabhinqa angabikho ngexesha lonyaka kunokusebenza ngokugqithiseleyo kunokusetyenziswa kwexesha langasemva kwexesha.
I-Stanozolol powder Ukuthengisa i powder eluhlaza
Indlela yokuthenga iStananol / Winstrol / powny powder kwi-AASraw
I-AAS eluhlaza ihlinzeka ngobumsulwa 99% Stanozolol / Winstrol / winny powder eluhlaza ukuya kumalabhu angaphantsi komhlaba ukwenzela ukufumana inzuzo ngobuninzi.
Iintlobo ezintlanu ezibalulekileyo omele uzizi malunga neStananol !!!